chitnge | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Author Archives: chitnge
Posted on November 30, 2017 by chitnge
ရုပ်နာမ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့မရဘူး ရုပ်နာမ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့မရဘူး။ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ပဲ သွားလို့ရတယ်ဆိုတာကို ဘဝင်ကျကျ ယုံကြည်အပ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကိုယ့်ရုပ်နာမ်ကိုယ်ချစ်နေတော့ ရုပ်နာမ်မပါဘူးဆိုတော့ တမျိုးကြီးဖြစ်နေတာ ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ရုပ်နာမ်ချုပ်လေ ကောင်းလေလို့သာ အောင်းမေ့ပါ။ မြတ်စွာဘုရားက ရောဟိတနတ်သားကို ဟောတော်မူတဲ့အခါမှာ ဒီလောကရဲ့အဆုံး နိဗ္ဗာန်ကို ရုပ်နာမ်နဲ့သွားလို့မရဘူး။ လောကရဲ့အဆုံး နိဗ္ဗာန်ကို မရောက်မချင်းလည်း ချမ်းသာစစ် ချမ်းသာမှန်ကို မတွေ့ဘူး။ ဒုက္ခကမလွတ်ဘူးလို့ အသေအချာ အတိအကျ ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ “ခန္ဓာ နိရောဓော နိဗ္ဗာနံ” ဆိုတာ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရုပ်နာမ်မပါလို့ ဘာမှလည်း … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
Posted on November 28, 2017 by chitnge
မှန်တာလေးလောက်တော့ ပြောပေးဖို့ကောင်းပါတယ် — အဘိဓမ္မာ တတိယနှစ်ကျောင်းသားက မေးတယ်တဲ့ — “နိဗ္ဗာန်ကို ရုပ်နာမ်နဲ့သွားလို့ ရသလားဆိုတာကို စာရေးဆရာတစ်ယောက်ကတော့ မရဘူးလို့ပြောနေလို့ တပည့်တော်တို့ သင်ရတာကတော့ ရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်ဟာယူရမှာလဲ” လို့ မေးမြန်းလျောက်ထားတယ်။ ဒီအခါ ဆရာသမားလုပ်သူက “အေး သင်ထားတဲ့အတိုင်း ယူပေါ့ကွာ” လို့ ဖြေလိုက်တယ်တဲ့ ဒါက တော်တော် မသင့်တော်တဲ့ အဖြေတစ်ခုပဲ။ နိဗ္ဗာန်ကို ရုပ်နာမ်နဲ့ သွားလို့မရဘူးဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားက အတိအလင်း ဟောထားတော်မူတာပဲ။ ရုပ်နာမ်က ဒုက္ခတုံးပဲ။ နိဗ္ဗာန်က ချမ်းသာစစ် ချမ်းသာမှန်။ … Continue reading →
Posted on August 14, 2017 by chitnge
ဘာသာရေး သာသနာရေးဆိုတာ အင်မတန်ကျယ်ပြော နက်ရှိုင်းတယ် အားလုံးလည်းသိပါတယ်။ မိမိဘာသာကို မိမိမဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင် နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှ ဒီပြင်ဘာသာတွေအကြောင်း နည်းနည်းပါးပါး ပြောချင်ရင်ပြောတာ အဆင်ပြေတာပေါ့။ မိမိဘာသာကို မဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင် ကောင်းကောင်းမလုပ်သေးဘဲနဲ့ ဟုတ်တိပတ်တိ အမှန်ကိုထိုးဖောက်ပြီး အသိမရသေးဘဲနဲ့ ကျန်တာတွေလျောက်ပြောနေရင် အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကို နံပါတ်ကုန်ပေါက်မြောက်အောင် လုပ်ဖို့က အဓိကပါပဲ။ ဒါက ပထမဦးဆုံး ဦးစားပေးရမယ့် လုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်။ အမြင်ဆိုတာ တည့်မတ်ဖို့တော့လိုတယ် အစစအရာရာ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း တည့်တည့်မတ်ဖို့လိုတယ်။ စွေ့စောင်း ကောက်ကွေ့ တိမ်းချော်နေရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ အမြင်ပါမကဘူး … Continue reading →
Posted on June 3, 2017 by chitnge
ဒဿနသိပ္ပံ ဒဿနသိပ္ပံဆိုင်ရာ အယူအဆများကို အိုင်းစတိုင်းက သူ့ရဲ့ ရူပဗေဒအခြေခံများ (The Fundaments of Theoretical Physics) စာစုမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ ဖော်ပြပုံမှာ “The sense-experiences are the given subject-matter.” အာရုံသိတွေက သဘာဝကပေးထားတဲ့ (Natural given) လို့ သတ်မှတ်ပြီး အဲဒီ အာရုံတွေကို ပြန်လည်စုစည်း ဖြေရှင်းဖို့ တည်ဆောက်တဲ့ သီအိုရီကိုတော့ (Man-made) လူက လုပ်ရတာလို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ “But the theory that … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Science	| Leaveacomment
Posted on February 24, 2017 by chitnge
သူတော်ကောင်းနှင့်တွေ့သည်ဆိုရာဝယ် အများသူငါ သူတော်ကောင်းနှင့် တွေ့လိုကြသည်။ တချို့က ဖွင့်ပြောကြသည်။ သူတော်ကောင်းနှင့် တွေ့ရန်ဆိုသည်မှာ လွယ်သောကိစ္စ မဟုတ်ချေ။ မိမိကိုယ်တိုင်က သူတော်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို သိတတ်မှသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်က သူတော်ကောင်းကို သူတော်ကောင်းမှန်း မသိတတ်ဘဲနှင့် သူတော်ကောင်းနှင့် တွေ့ချင်သည်ဆို၍ အချည်းနှီးပင်ဖြစ်သည်။ သူတော်ကောင်းကို တွေ့ရန်မှာ တဖွဖွပြောနေရုံဖြင့် မရပေ။ ကိုယ်တိုင်က သူတော်ကောင်းဖြစ်မှသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်က Tags: Myanmar Posts
Posted on February 23, 2017 by chitnge
စိတ်ရင်းစိတ်ထားအရေးကြီးပါတယ် ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များရဲ့ စိတ်ရင်းစိတ်ထားဟာ တော်တော်အရေးကြီးကြောင်း သိရတယ်။ အခု အသက်အရွယ် ကြီးသွားတဲ့ အခါကျ ပလ္လင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ တစ်ပါးသူရဲ့ မကောင်းကြောင်းလည်း သိပ်မပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ကိုယ့်တပည့် သားသမီးတွေနဲ့ တစ်ပါးသူရဲ့ လှောင်ကွက်တွေကို လှောင်ရယ်ရင်းနဲ့ တရားဟော ပလ္လင်ပေါ်ကနေ လုပ်တာမျိုးလည်း မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ တော်တော်လေးတော့ မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ တော်တော် မှားယွင်းတဲ့ ကိစ္စတွေကို Tags: Myanmar Posts
Posted on February 21, 2017 by chitnge
ငိုညည်းခြင်းသည်ပုဂံသားတို့၏အလုပ်မဟုတ် လောကအလယ်၌ အသက်ရှင်သန်ကြရာ အခက်အခဲ ပြဿနာများကတော့ ရှိမည်မှာ သေချာသည်။ သင်္ဘောကြီးတစ်စင်း သမုဒ္ဒရာထဲသွားလျှင် လှိုင်းတွေ အထပ်ထပ်တွေ့ရသကဲ့သို့ အခက်အခဲပေါင်း မြောက်မြားစွာ တွေ့ရမည်သာဖြစ်သည်။ အခက်အခဲတွေ့တိုင်း ငိုညည်းနေ၍ မရချေ။ အခက်အခဲတွေ့တိုင်း လက်ဖြန့်တောင်းခံနေ၍ မရချေ။ အခက်ခဲတွေ့တိုင်း ဒေါသူပုန်ထ၍ ဆန္ဒပြနေ၍ မရချေ။ အခက်အခဲတွေ့တိုင်း မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ လောကကြီးကို စိတ်ချဉ်ပေါက်နေ၍ မဖြစ်ချေ။ အခက်အခဲတွေ့လျှင် ဖြေရှင်းရမည်၊ ကျော်လွှားရမည်၊ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ရမည်၊ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထလုပ်ရမည်။ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ၀ီရိယ Tags: Myanmar … Continue reading →
Posted on February 19, 2017 by chitnge
ပုဂံဟာဘယ်တော့မှမငိုရှိုက်ဘူး ပုဂံဟာ မြေငလျင်ဒဏ်ကြောင့် လောကဓံတွေ့တာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ကောင်းနိုးရာရာတွေကို ပြုပြင် မွမ်းမံနေတာပဲ။ အခုဆိုရင် နေ၀င်ချိန်ကို ကြည့်ဖို့ ရအောင်လည်း စီစဉ်နေကြပြီ။ ဒီလိုပဲ စီစဉ်သွားရတာပဲ။ မြေငလျင် လှုပ်တာကိုတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မှာလည်း – ဒါ သဘာဝ အန္တရာယ်ပဲ။ ကိုယ်က ပျော့ညံ့စရာလည်း မလိုပါဘူး ပုဂံကို နှိမ်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ ပုဂံဟာ သူ့ဟာနဲ့သူ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပြီး ဆက်သွားနေမှာ – ဒီလိုပဲ ခံယူရမှာပဲ။ တစ်စုံတစ်ခုတွေ့တိုင်း ငိုညဉ်းနေလို့တော့ … Continue reading →
Posted on February 18, 2017 by chitnge
Something about Nirvana Nirvana is the world beyond. So, it is different from the ordinary world. The world beyond means it is free from the world. At Nirvana, there is no character of the world such as suffering, changing and … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, English Posts, Magga Nyanna, Phala Nyanna	| Leaveacomment
Posted on February 13, 2017 by chitnge
တရားအားထုတ်လျှင် တရားအားထုတ်ချင်တယ် နိဗ္ဗာန်သွားချင်တယ်ဆိုလျှင် ရုပ်နာမ်ကို အပြတ်သတ်ရမည်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ရိုးရိုးလုပ်လျှင်တော့ လုပ်လို့ရပါသည်။ သို့သော် တရားအားထုတ်ချင်တယ် နိဗ္ဗာန် ရောက်ချင်တယ်ဆိုလျှင်တော့ ရုပ်နာမ်ကို သေအောင်သတ်မှရမည် – (ခန္ဓာ့နိယောဓေါ နိဗ္ဗာနံ) ဆိုသော ဝေါဟာရရှိသည်။ ခန္ဓာချုပ်မှ ဖြစ်မည်။ ချုပ်အောင်သတ်ရမည်၊ မသတ်ဘဲ သူ့ကိုမွေးထားလျှင်တော့မူ တရားအားထုတ်ရာလည်း မကျ နိဗ္ဗာန်လည်း မရောက်ဖြစ်မည်။ နိဗ္ဗာန်မရောက်လိုဘဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနှင့် သံသရာလည်မည်ဆိုလျှင်တော့ ရပါသည်။ ကိုယ်ကြိုက်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ကိုယ်လုပ်နိုင်သည်။ တရားကိုအားထုတ်မယ် နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ် ဆိုလျှင်တော့မူ ရုပ်နာမ်၏ အပျက်ကို … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ	| Leaveacomment
Posted on February 7, 2017 by chitnge
အောင်မြင်ခြင်း အောင်မြင်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စားကြသည်။ အောင်မြင်လျှင် ပျော်မြူးရသည်။ အချို့လွန်စွာ ပျော်မြူးတက်ကြွကြသည်။ အောင်မြင်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စား သင့်ပါသည်။ အောင်မြင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အကျိုးတရားဟု ယူလျှင်ရသည်။ အောင်မြင်အောင် အကြောင်းခံခဲ့ရသည်။ အကြောင်းခံတရားများ စုစည်း၍ ပြည့်စုံ လုံလောက်သောအခါ အကျိုးတရားအဖြစ် ဖြစ်လာကာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။ အကြောင်းခံတရား မရှိဘဲ အောင်မြင်သည် ဟူ၍တော့မူ မဖြစ်နိုင်ချေ။ ဤလောက၌ အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။ အကြောင်းခံမှ အကျိုးရမည်။ အကျိုးရလျှင် ပျော်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ပျော်ရွှင်ရန်အတွက် အကြောင်းခံရမည်။ ပျော်ရွှင်လိုပါသလားဟု … Continue reading →
Posted on February 4, 2017 by chitnge
တရားအားထုတ်သည်ဆိုရာဝယ် တရားအားထုတ်ခြင်းဟာ ကောင်းပါတယ် လွန်စွာမှလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိပ္ပာယ် သိဖို့လိုတယ်။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲ။ နိဗ္ဗာန်ကို ဦးတည်ပြီးတော့ ရည်မှန်းပြီးတော့ အားထုတ်ရတာပါ။ တရားအားထုတ်တာကတော့ တရားအားထုတ်တာပဲ။ ဘာဘာညာညာတွေ ဗဟုသုတရှိလို့ လျှောက်ပြောနေလို့တော့ တစ်ခြားစီပဲ။ တရားအားထုတ်တယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ချင်ရင် ၀ိပဿနာကို ရှုရမယ်။ မရှုရင် မရဘူး။ စိတ်အစားထိုးဖို့ ဆိုပြီးအခု ပြဿနာတွေ တင်လာကြတယ်။ တော်တော်ကို ကမောက်ကမနိုင်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုပဲ။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ Tags: Buddhism, Myanmar Posts
Posted on February 3, 2017 by chitnge
နိဗ္ဗာန်သို့ချဉ်းကပ်ကြစို့ နိဗ္ဗာန်သို့ ချဉ်းကပ်ကြစို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်းတော့ သိရပြီပေါ့။ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း သတင်းကောင်းတွေ သိရပြီပေါ့။ ၀မ်းသာစရာပါပဲ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ချို့ကတော့ ပန်းတိုင်မရှိဘူးလို့ ကြွေးကြော်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ပန်းတိုင်ရောက်ပြီး အဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုတာ မကြိုက်လို့၊ သူတို့က ဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားချင်လို့၊ အသိပညာအတွက် ရှာဖွေချင်တဲ့ သဘောကြောင့်ပါ။ ထူးဆန်းတဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေပါ။ သူတို့က Tags: Buddhism, Myanmar Posts